| Speak နှင့် Translate Android အတွက်အခမဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အားလုံးဘာသာစကားများ Voice ကို Translator Speak နှင့် Translate
အားလုံးဘာသာစကားများ Voice ကို Translator APK ကိုဆင့်ဆိုရမည်နှင့် Translate
Speak နှင့် Translate - အားလုံးဘာသာစကားများကိုဘာသာပြန်ဆိုသူသင်၏ဘာသာပြန်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်အဘိဓါန် voice မှအခမဲ့အသံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ app ကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်ဤမိန့်ခွန်းကိုသင် output ကိုသင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောဘာသာစကားသို့မဆိုဘာသာစကားမှဘာသာပြန်ဆိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ စာသားကိုအဘိဓါန်များနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုသူရန်ဤမိန့်ခွန်းကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ဘာသာစကားဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အနက်ကိုလိုလားကူညီနိုင်သည်။ below.All ဘာသာစကားများကို Translator တွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင်းပြောဆိုခြင်း Translator app ကိုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်:
ဘာသာစကားအားလုံးစကားသံကိုဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်အဘိဓါန် app ကို Translate ဖို့စကားကို ပြော. ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကအင်္ဂါရပ်ကမည်သည့်ဘာသာစကားသို့မဆိုဘာသာစကားမှဘာသာပြန်ဆိုရန်သင့်အားခွင့်ပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘာသာစကားအားလုံးမိန့်ခွန်းဘာသာပြန်ဆိုသူဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်အားလုံးကိုကြိမ်ကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်နိုငျသောအသံနှင့်အခမဲ့ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးဘာသာစကားများကို Translator မှအင်္ဂလိပ်:
ငါတို့ရှိသမျှသည်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတကာဘာသာစကားဖြစ်ပြီး, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူများကနားလည်ချင်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစပီကာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုချင်ဖြစ်စေသူတို့ဇာတိဖြစ်ကြောင်း OR သူတို့နေ့စဉ်ဘဝဆက်သွယ်ရေးအတွက်အခြားဘာသာစကားကိုအဖြစ်အင်္ဂလိပ်သုံးပြီးနေကြသည်။ ကြောင်းသိရ ကျွန်ုပ်တို့၏ application ကိုသင်တို့ကိုလည်းကမ္ဘာ၏အခြားမည်သည့်ဘာသာစကားသို့အရေးအသားအားဖြင့် OR စကားသံကို input ကိုအားဖြင့်လည်းကောင်းအင်္ဂလိပ်စကားလုံး, စာကြောင်းများနှင့်အပိုဒ်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်သမျှသောဘာသာစကားများဘာသာပြန်ဆိုသူမှအင်္ဂလိပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Speak နှင့် Translator သင်တို့ရှိသမျှသည်ဘာသာစကားစကားသံကို Translator မှအင်္ဂလိပ်ကြောင့်အသုံးပြုတဲ့အခါပိုမိုအသုံးဝင်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ : ဖော်ပြခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းဘာသာစကားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထဲတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီတော့အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီနှင့်ထိပ်တန်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဆက်သွယ်ရေးဘာသာစကားယခုကပင်အရှေ့အာရှနိုင်ငံများမှာတရုတ်, ဂျပန် & ကိုရီးယားနှင့်လည်းလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
app ကိုဖွင့်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့အခမဲ့ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုသူမဟုတ်ပါဘူး Translate ဖို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အစားကလည်းအသံဖြင့် input ကိုအတူတစ်ဦးဘာသာစကားအားလုံးအဘိဓါန် App ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မက်လိုချင်သောဘာသာစကားမှာစကားပြောနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုအပြင်, သငျသညျလည်းစကားများသို့မဟုတ်စာကြောင်းများရိုက်ထည့်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ရနိုင်တယ်။ အဆိုပါဘာသာပြန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာဘာသာစကားမဆိုဘာသာစကားကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါအဘိဓာန်အဓိပ္ပာယ်ကိုနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာစကားအားလုံး app ထဲမှာ Translate ဖို့စကားကို ပြော. ၏တတိယအများဆုံးဒီကဗျာအင်္ဂါရပ်ကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှု interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တဦးတည်းဘာသာစကားမှဘာသာပြန်ဆိုနှင့်အခြားဘာသာစကားမှာ output ကိုနားထောင်နိုင်သည်ရိုးရှင်းတဲ့ခလုတ်ကို၏အပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူ။ ဘာသာပြန်ချက်အင်္ဂါရပ် voice ဖို့အံ့သြဖွယ်အသံသည်ကိုသင်အလိုအလြောကျဘာသာပြန်ထားသောစာသားကိုနားထောင်ဖို့ခွင့်ပြု, သင်အဖန်ဖန်စပီကာခလုတ်အပေါ်ကိုအသာပုတ်ရန်မလိုပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် app ကိုအကောင်းဆုံးဘာသာပြန်ချက်နှင့်အဘိဓါန်အင်္ဂါရပ်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင် apps များကဤစကားကို ပြော. ဘာသာပြန်ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ဘာသာစကားများ app ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်အတွက် Translate ဖို့ဟောပြောလော့။
အောက်ပါဘာသာစကားကိုပြောဆိုအတွက်ထောက်ခံနှင့်အဘိဓါန် app ကို Translate & voice နေကြသည်:
ဘာသာပြန်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ထားဘာသာစကားများ & မျိုးကွဲများကိုထိမ်းသိမ်း;
အာဖရိက, Albanian အဘိဓါန်, အာရဗီ, အဘိဓါန် Armenian-, Azerbaijani-, အဘိဓါန် Basque-, ဘီလာရု, ဘင်္ဂါလီ, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, Cebuano-, Chichewa, တရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ), တရုတ် (ရိုးရာ), Croatian အဘိဓါန်, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, အဘိဓါန် Esperanto-, Estonian အဘိဓါန်, ဖင်လန်ဖိလစ်ပိုင်, ပြင်သစ်, အဘိဓါန် Galician-, ဂျြောဂြီယ, ဂျာမန်, ဂရိ, ဂူဂြာရ, ဟာအီတီ Creole, ဥစာ, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, အဘိဓါန် Hmong, ဟနျဂရေီ, လန်, အစ်ဂဘို, အငျဒိုနီးရှား, အိုငျးရ, အီတလီ, ဂျပန်, ဂျာဗား, ကန်နာဒါ, Kazakh-, ခမာ, ကိုရီးယား , လာအို, လကျတငျ, အံ, အာနီယံ, စီဒိုနီယံ, အာလာဂါစီ, မလေး, မလေးရာလ, မောလ်, ရီ, မာရသီ, လီး, မြန်မာ (ဗမာ), နီပေါ, ဘှ, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ပနျခြာပီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆားဗီး, ဆက်ဆိုသို, ဆငျဟာ, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, ဆိုမာလီ, စပိနျ, ဆူဒနျ, ဆွာဟီလီ, ဆှီဒငျ, Tajik-, တမီး, ဂု, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, အဘိဓါန် Uzbek-, ဗီယက်နမ်, ဝလေ, Yiddish-, ရိုရု, ဇူလူ။
အားလုံးဘာသာစကားများအတွက်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာနဲ့ Translate Download များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စကားသံကို input ကိုအတူ 106 ဘာသာစကားများဘာသာပြန်ချက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်: တိကျမှန်ကန်သောဘာသာပြန်ချက်များသည်သာမှန်ကန်သောဘာသာစကား input ကိုအသုံးပြုပါ။
- စကားကို ပြော. ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်နှင့် Translator voice မှအားလုံးဘာသာစကားများကိုအသံဖြင့် Translate ။
- စကားပြောဆိုမှုအတွက်ဆက်ပြောသည် option ကိုဖျက်ပစ်ပါ။
- ဘာဂ် Fixed ။
အားလုံးဘာသာစကားများ Voice ကို Translator Speak နှင့် Translate
4.75 ကို MB
ဘာသာပြန်သူအားလုံး - …